Dowlada Jabouti oo la amray in ay Bixisio Magdhow gaadhaya $385 Milion – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dowlada Jabouti oo la amray in ay Bixisio Magdhow gaadhaya $385 Milion
Allhadaaftimo April 5, 2019 Uncategorized
Maxkamadda dhexdhexaadinta caalamiga ee London ayaa dawladda Jabuuti ku amartay in ay bixiso 385 Milyan oo dollar iyo lacag dulsaar ah. Lacagtan ayaa ah xuquuqda shirkadda DP World ku yeelatay dekedda Doorale ee Jabuuti.
Sanadkii hore ayay dawladda Jabuuti gabi ahaanba shirkadda DP World ee reer Imaaraad ka eriday maamulladda dekedda oo ay ku lahayd saami dhan 33.34% halka Jabuuti lahayd 66.66%. waxaanu go’aanka haddu salka ku hayaa lacagta ka gashay iyo tan ay ka faa’iidi lahayd wakhtiga u hadhay shirkadda Dp World saamigeeda dekedda Jabuuti.
Go’aanka hadda ayaa ubucdiisu tahay in gabi ahaanba ay dawladda Jabuuti jabisay heshiiskii Dp World ay la gashay 2006 oo ahaa mid sharci ah, islamarkaana booskeedii u waddo shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha sidaas awgeedna ay bixiso lacagtan dawladda Jabuuti.
Previous Axmed Geele Reer Maaha Ee Waa Nin Qaran,,,Suldaan Saleebaan Boqor Cismaan
Next Wasiirkii ugu da’da yaraa 14 wasiir oo soo maray wasaaradda Gaashaadhigga Somaliland oo xilkii la wareegay